usomizi udalula akuhlosile ngesiteshi se-TV ASISUNGULILE - Ilanga News
Home Izindaba usomizi udalula akuhlosile ngesiteshi se-TV ASISUNGULILE
usomizi udalula akuhlosile ngesiteshi se-TV ASISUNGULILE
INTSHISEKELO yabantu ezinkundleni zokuxhumana yikhona okuphoqe uSomizi Mhlongo Motaung ukuba asungule isiteshi sikamabonakude enkundleni yezokuxhumana, i-Youtube.
USomizi ungomunye wosaziwayo abathandwayo kuleli kanti ngesikhathi ekhuluma neLANGA izolo, udalule ukuthi isiteshi sakhe sizohlukana kabili njengoba kuzoba nohlelo lokupheka nolokugqugquzela abantu.
Uthi baningi abantu abebekhombisa intshisekelo njalo uma eziqopha epheka ezinkundleni zokuxhumana, okwenze wabona kungcono ukuba acobelele abalandeli bakhe ngendlela ayisebenzisayo uma epheka ukudla okwahlukene.
“Abantu bebehlale befuna ukwazi indlela engipheka ngayo njengoba isitayela sami (sokupheka) sehlukile. Kayikho imigomo engiyilandelayo, ngipheka ngendlela yami futhi ehambisana nami,” esho.
Unanele ngokuthi okunye okumgqugquzelile wukuthi abangani bakhe bayakuthokozela ukudla akuphekayo, okusho khona ukuthi kumnandi.
Uthi mayelana nohlelo lokukhuthaza nokugqugquzela, luqhamuke ngohlelo alushayelayo esiteshini iMetro FM, iThe Bridge, alushayela noDineo Ranaka noLerato Kganyago.
Uveze ukuthi kulolu hlelo, olungena phakathi nezinsuku kwiMetro FM, kunesigamu esibizwa nge-Ask A Man, okuyilona olumenze waqala uhlelo oluzokhuthaza, luphinde lugqugquzele abantu.
“Nginqume ukuba ngikusabalalise engikwenza kwi-Ask A Man ngoba ngibonile ukuthi baningi abantu abangasizakala. Engizokwenza wukuthi ngizosabalalisa engizokhuthaza ngakho.
“Ngeke kugcine ngobudlelwano basothandweni kuphela, kodwa ngizokhuluma ngezinto ezithinta abantu ukuze bahlale begqugquzelekile ngaso sonke isikhathi,” esho.
Ubuye waveza ukuthi isikhathi okuphilwa kusona sihle ngoba kasisekho isidingo sokulinda iziteshi zikamabonakude ukuze ube nohlelo lwakho.
“Isikhathi siyavuma manje ukuthi sizenzele izinto ngokwethu futhi sikwazi nokwenza imali ngesikhathi esifanayo njengoba siphila esikhathini sezobuchwepheshe,” esho.
Uthi ngeke kube nguyena kuphela ozokhuthaza, kodwa uzophinde abize nabangani bakhe bazosiza ukugqugquzela abantu.
Uveze ukuthi isiteshi sakhe sizotholakala ekhasini lakhe elibizwa ngokuthi, Somizi Mhlongo Motaung.
USomizi ubenohlelo lwakhe kumabonakude olubizwa ngokuthi, Leaving The Dream with Somizi obelukhonjiswa kuMzansi Magic.
Uthe ngeke akwazi ukuphawula ngalolu hlelo njengoba lusamile ukukhonjiswa emoyeni.
Uphinde wala waphetha ukuphawula ngempilo yase-mshadweni, kwazise usanda kubopha elikasofasilahlane nomyeni wakhe, uMohale Motaung Mhlongo.
Uphethe ngokunxusa abantu ukuba bahlale ezindlini, balalele imiyalelo kahulumeni kulezi zinsuku ezi-wu-21 zokugonqa.
“Abantu mabaphume uma beyothe-nga izinto ezibalulekile kuphela ngoba igciwane kalizisabalalisi, kodwa ngabantu abalibhebhetheki-sayo.
“Uma bengalaleli, isimo sizoqhu-beka nokubheda kakhulu,” esho.
Uthi lesi simo sesikhubaza nomnotho ngakho abantu mabahloniphe, bangazicabangeli bona kuphela.
Previous articleUMSINDO NGESIPHROFETHO “SIKASHEMBE NGE-COVID19”
Next articleURamaphosa uhlangane nabaholi be-ZCC